Global Voices teny Malagasy » Côte d’Ivoire : Rahoviana Ny Fanokafana Indray Ireo Anjerimanontolo? · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 31 Oktobra 2011 18:16 GMT 1	 · Mpanoratra Kanigui Nandika avylavitra
Sokajy: Afrika Mainty, Cote d'Ivoire, Ady & Fifandirana, Fanabeazana, Hafanàm-po nomerika, Mediam-bahoaka, Tanora
Nandritra ny disadisa nialoha ny fifidianana tao Côte d'Ivoire , ireo anjerimanontolo telo ao amin'io firenena io (Cocody , Abobo-Adjamé sy Bouaké ) dia nakatona ary tsy nasiana olona tany amin'ireo toeram-ponenan'ny mpianatra. Raha betsaka tamin'ireo Ivoariana no nadray izany fanapahan-kevitra izany tamin'ny lafiny tsara, amin'izao fotoana kosa dia maro ireo mametra-panontaniana manoloana ny manjavozavo mikasika ny ho fanokafana indray ireny anjerimanontolo ireny.
Tanjona roa no nanosika ny fanakatonana : famotsorana ireo efitrano nobodoin'ireo tsy mpianatra ara-dalàna (indrindra fa ireo mpikambana mitam-piadiana ao amin'ilay Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire , na Federasionan'ny Mpianatra ao Cote d'Ivoire), ary fanavaozana ireo foto-drafitrasa, izay efa tena anaty fahasimbana tafahoatra.
Raha natao naresaka be ny fanombohana ny asa niaraka tamin'ny fitsidihan'ny Minisitry ny fampianarana ambony Cissé Bacongo , nitondràna ny mpanao gazety, tsy mampitony ny sain'ireo mpianatra, ny mpampianatra ary ny ray aman-dreny velively ny tsy fahazoana antoka  momba ny daty tokony hiverenan'ny fampianarana.
Tato anatin'ny andro vitsivitsy, nifindra ho any amin'ireo tambajotra sosialy ny fifanakalozan-dresaka ary indrindra indrindra fa ny Twitter. Antoine Mian (@Mianseh ), mpitolona ho an'ny TIC eny amin'ny sehatry ny fampianarana, dia nanipika tsara ny voka-dratsy ateraky ny fanakatonana lavareny ny anjerimanontolo :
@Mianseh  ny fidonanam-poana no renin'ny#VICES  (na ny haratsiana) rehetra ary nandritra ny 5 taona ny mpianatra Ivoariana no nitaingin-tamboho. Tongasoa ry #VICES #sosUniv #criseUniv #civ2010 
Ireo mpitoraka bilaogy kiritika dia tsy niandry fiangaviana vao nametraka fanontaniana mivantambantana tamin'i Alain Lobognon , iray amin'ireo minisitra Ivoariana vitsy mbamanana kaonty Twitter miasa, Marc Antoine Hodonou  no nanontany azy :
@Ceschod fanontaniana 1 monja: efa misy daty voatondro ve hanokafana indray ny toeram-ponenan'ny mpianatra ny #Ci225  ? #civ2010  #civ225 
Tsaratsara kokoa, i Don Prince  dia nandroso ala-olana iray mety ho an'ny andaniny sy ny ankilany izay afaka sady hanohizana ny asa no hamerenana koa ny fampianarana :
@princedonk  Ny tiako ho lazaina, dia ny hoe afaka tohizana ny fampianarana amin'ny alalan'ny ampahany amin'ireo faritry ny anjerimanontolo nasiam-panamboarana saingy arahana fepetram-piarovana! #sosUniv 
Raha ny heviny, ny Institut National Polytechnique Houphet Boigny  (INP-HB) no efa nanaporofo fa azo atao tsara izany. Ity sekolim-panjakana ambony ity izay ao Yamoussoukro ( renivohitra ara-politika) dia manana sampana ao Abidjan ary ny mpianana sasany dia efa nampiantranoina ao amin'ny toeram-ponenany ao Cocody. Na eo aza ny fanakatonana ireo toeram-ponenan'ny mpianatra ao Cocody, dia efanitohy ny fampianarana ao amin'ny INP-HB araka ny ampahatsiahivan'i Prince Don  azy.
@princedonk  Na eo aza ny fanakatonana ireo anjerimanontolo, ny sampan'ny INPHB ao amin'ny anjerimanontolon'i Cocody nitohy niodina hatrany, ohatra tsara arahana #sosUniv 
Ho an'ny hafa, ny hasarotana mifamatotra amin'ny fampiantranoana sy ny fitaterana ao Abidjan dia mahatonga fanolorana vaha-olana hafa, toy ny hoe fampianarana ampitain-davitra. Hagger55  dia mandroso soso-kevitra hoe :
@hagger55 Lesona anaty aterineto ; fomba fanao amin'ny visioconférence mba hanonerana ny taona efa natomboka @anarshy  @Sanders225  #sosUniv  #civ2010  mba handehanana haingana.
Saingy eo ny tsy fisian'ny foto-drafitrasa voaomana ho amin'izany sy ny havitsian'ny tokantrano afaka manana fitaovana informatika ho amin'izany, kely ny vintana hidirana amin'izany vaha-olana izany hoy i Stephane Kouakou (@iamstephanek ) mampahatsiahy:
@iamstephanek  Hatraiza ny fampitaovana? @hager55 : Lesona anaty aterineto ; fomba fanao amin'ny visioconférence mba hanonerana ny taona efa natomboka @anarshy @Sanders225 #sosUniv 
@MIANSEH  Efa fantatra ny daty. Ampahafantarin'ny Govrnmt ny be sy ny maro izany amin'ny volana Novambra #ci225  Ndeha isika hisoroka ny hadisoan'ny fahiny #civ2010 
@MIANSEH  Tsy sokafana an-kamehana fotsiny ireo Anjerimanontolo. Tsaboina aloha ny tsy mety alohan'ny fanokafna #ci225 #civ2010 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/10/31/24923/
 disadisa nialoha ny fifidianana tao Côte d'Ivoire: https://fr.globalvoicesonline.org/dossiers/dossier-cote-divoire-2011/#featured
 Abobo-Adjamé : http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_d
 Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire: http://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_estudiantine_et_scolaire_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
 Cissé Bacongo: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ciss%C3%A9_Bacongo
 Alain Lobognon: http://twitter.com/#!/ALAINLOBOG
 Marc Antoine Hodonou: http://twitter.com/#!/Ceschod
 Don Prince: http://twitter.com/#!/princedonk
 Institut National Polytechnique Houphet Boigny: http://www.inphb.edu.ci/